CW Admin, Author at Chin World
တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ဆိုရင်…
ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စိုးမိုးသည့်ကျေးရွာများသို့ဆန်ပေးပို့ရန်အခက်အခဲရှိ
ပလက်၀မြို့နယ်ရှိ နိုင်ငံဝန်ထမ်းများ လစာ ၂ ဆ ခံစားခွင့်ရ
ကိုဗစ် ၁၉ ကို ကျော်လွှားဖို့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို မြှင့်တင်ပါ
ပူးကျင်ရှင့်ထန် ( သို့မဟုတ် ) သမိုင်းဝင် ဖက်ဒရယ်လှုပ်ရှားမှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်း
ဗီဇပြောင်းကိုဗစ်ပိုး ကူးစက်မှုကို အချင်းချင်း ဖေးမ,မှုနဲ့ ကာကွယ်ပါ
ကိုဗစ် ၁၉ အစုလိုက် ကူးစက်မှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ
ချင်းပြည်နယ်မှာ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ခန့်အပ်ခြင်း၏ ပဟေဠိ
ခေတ်သစ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းကို ကြိုးကိုင်နေသည့် အုပ်စုများ
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်နှင့် နိုင်ငံတကာရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေ လွဲချော်နေပြီလား (Salai Henry Lian)
ကိုဗစ်အလွန် လူမှုစီးပွားရေး ထိခိုက်မှုတွေ ပြန်လည်ကုစားဖို့ ဆိုရင်…
သွေး (စစ်ကိုင်း) ကိုဗစ် ၁၉ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်သလို ကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာ တွေ့ကြုံရမယ့် အခက်အခဲတွေကိုပါ မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုဗစ် ၁၉ ကြောင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုဘဝ ထိခိုက်မှုတွေကို နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ တွေ့ကြုံနေရတာပါ။ ရောဂါဖြစ်မှ ကုသ,တာထက် မဖြစ်ခင် ကြိုတင် ကာကွယ်တာက ပိုမိုကောင်းမွန်တာကြောင့် ကိုဗစ်ကူးစက် မခံရအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်ကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး၊ ကာကွယ်ရေး အတွက် လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ နိုင်ငံ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု စီမံခန့်ခွဲမှုချင်း မတူကြပါဘူး။ ကိုဗစ် စ,ဖြစ်ချိန် အစောပိုင်းကာလမှာ…
ဗီဇပြောင်း ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ပါ
သွေး (စစ်ကိုင်း) တစ်ကျော့ပြန် ဗီဇပြောင်း ကိုဗစ် ၁၉ ရောဂါဟာ အာရှနိုင်ငံတွေကို ကူးစက်ပျံ့နှံ့လာနေတဲ့ သတင်းတွေ နေ့စဉ်ကြားနေရဆဲ ဖြစ်သလို တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လျော့ကျလာပြီ၊ တားဆီးကာကွယ်နိုင်ပြီ ဆိုတာမျိုးတွေတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒီကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို ရင်ဆိုင် ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတိုင်းက ရုန်းကန်ကြိုးပမ်းနေရဆဲပါ။ ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကိုဗစ်တတိယလှိုင်း ဖြစ်မလာဖို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီကနေ တစ်သင်းတစ်ဖွဲ့ အပါအဝင် ကျမတို့ ပြည်သူအားလုံး အထူးသတိပြု ကာကွယ်ကြဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ ကိုဗစ် ကူးစက်မှု အမြင့်မားဆုံး နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို လေ့လာကြည့်ရင် နိုင်ငံတဝှမ်း ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံမှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်နိုင်လာတာက အားတက်စရာပါ။ ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးမှု…
ဆလိုင်းဟင်နရီလျန် Chin World Media April 10, 2021 မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များက အသိ အမှတ်ပြု၊ ချီးကျူးသည်အထိ အောင်မြင်ခဲ့ချေပြီ။ နိုင်ငံတကာရှိ အထင်ကရ သတင်းစာ၊ စာနယ်ဇင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဥ်၊ မီဒီယာ စသည်တို့ကလည်း မြန်မာ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်းကို အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ ထိုမျှမက ပြည်သူတို့၏ အကြမ်းမဖက်လူထုမနာခံမှု (CDM) လှုပ်ရှားမှုကို ၂၀၂၂ခုနှစ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းဆိုင်ရာ နိုဘယ်လ်ဆုအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်း ထားသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ်တွင် မြန်မာပြည်သူများသည် အောင်လံကိုလွှင့်ထူနိူင်ခဲ့ပြီဟုဆိုလျင် မမှား။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များသည် မြန်မာပြည်သူများအတွက်/နှင့် ရပ်တည်လျက်ရှိ နေသည်မှာ သိသာထင်ရှားလှပါသည်။ အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက် စစ်အုပ်စုကို စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊…
အဓမ္မတွေကို တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ Civil Disobedience Movement သမိုင်းကြောင်း
အဓမ္မတွေကို တွန်းလှန်ခဲ့တဲ့ Civil Disobedience Movement သမိုင်းကြောင်း Dr. Lian H. Sakhong Chin World Media February 12, 2021 (ဤဆောင်းပါးသည်- ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှူန်းဆာခေါင်းမှ ချင်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားမှုအား မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ကာ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဆလိုင်းလျန်မှူန်းသည် ချင်းကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ပြည်တွင်းနှင့် လွတ်မြောက်နယ်မြေများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် တလျှောက်လုံးပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် UPDJC ဟုခေါ်သော ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေမှု ပူးတွဲကော်မတီတွင် ဒုဥက္ကဌအဖြစ် ပါဝင်နေသူလည်း ဖြစ်သည်။ အယ်ဒီတာ) စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ “Civil Disobedience Movement (CDM)” မှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူအားလုံးကို…
“ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ သမိုင်း ရာဇဝင်ရိုင်းရတော့မလား”
“ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ သမိုင်း ရာဇဝင်ရိုင်းရတော့မလား” B A Thang Chin World Media February 04, 2021 ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် သောင်ပြို၊ ကမ်းပြိုသာမကပဲ မိုးပြိုတဲ့တိုင်တောင် အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ ပါလီမာန်အစည်းအဝေးသစ် စတင်မယ့်နေ့မှာ တပ်မတော်အစိုးရမှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်၊ ၂၀၂၁ မှာ နိုင်ငံတော်အာဏာကို သိမ်းယူလိုက်ပြီး လူထုဆန္ဒကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဆန့်ကျင်လိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ယူကာ ကော်မတီများ၊ ပြည်နယ်ကောင်စီများကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာ Pu Maung Har က အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြည့်စွက်ပါဝင်ခဲ့ရပြီး၊ ချင်းပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာလည်း Pu Terence San Mawi…
Biography of Dr. Vumson Suantak by Bianca Son
Biography of Dr. Vumson Suantak Sunday, 21 June 2009 13:27 Mang Khan Cing MY FATHER, Vum Son Suantak, was born to Pu Ngul Zam and Pi Neam Mang in the Sizang village of Tamdeang on November 9th, 1937. He was their third son. Two of his older brothers died of…
Fort Siallum, isadefensive fort in Chin State, Myanmar, built during the British annexation of Chin Hills, Myanmar. The fort was built by the Chin (Sizang) in the year of 1889 and located near Voklak village in Tedim Township, Myanmar. On4May 1889, The Chin (Sizang tribe) warriors…
About Khai Kam
Khai Kam (1864–15 September 1919) wasaChin leader who fought the British forces when they invaded Chin Hills/Chin State in the late 19th century. Two years after the British had conquered the Chin Hills, he ledarebellion to overthrow the British administration from Chin Hills. Unsuccessful in his…
“ကိုဗစ် ၁၉ ကို မျက်ခြည်မပြတ် သတိပြုပါ”
မင်းတပ်မြို့နယ်မှာ စစ်ဘေးရှောင်များနားခိုဖို့ စစ်ကင်းမဲ့ဇုံ လိုနေ